ဟန်းဂုရွာ: Busan Christmas Tree Festival (부산크리스마스트리문화축제) ပွဲတော်ကို သွားကြမယ်
Busan Christmas Tree Festival (부산크리스마스트리문화축제) ပွဲတော်ကို သွားကြမယ်
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘူဆန်တွင် တွင် ကျင်းပမည့် Busan Christmas Tree Festival (부산크리스마스트리문화축제) ပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာလ(၃၀) ရက်နေ့မှ ဇန်န၀ါရီလ(၅) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ခရစ်စမတ် သစ်ပင် ပွဲတော်ကို Gwangbok-dong, Jung-gu, Busan (부산 중구 광복동 ) တွင် ကျင်းပခဲ့သည်မှာ ( ၅) နှစ်မြောက် ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်တွင် အရောင်အသွေး ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး နဲ့ ထွန်းညှိထားသော မီးရောင်စုံများကို  လှပစွာ တွေ့မြင်ကြရပါမည်။ အနုပညာမြောက် တင်ဆင်မှုများကိုလည်း တွေ့မြင်ကြရပါမည်။ နေ့စဉ် ညနေ (၆) နာရီ မှ ည (၁၁) အထိ မီးများကို လှပစွာ ထွန်းညိုထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ပွဲတော်တွင် တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲများ ၊ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်တွင် ဆုတောင်းစာများ ရေးသားခြင်း ၊ လမ်းမပ်ါမှ ဖျော်ဖြေပွဲများ ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်သူများ ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးသူများကို အများအပြား တွေ့မြင်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီနှစ် မှာတော့ အဓိက ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးကို အမြင့် မီတာ (၂၀)ခန့်ပြုလုပ်ထားရှိပြီး အရင်နှစ်တွေထက် ပိုကြီးကျယ်ခမ်းနား အံ့မခန်းအောင် ကျင်းပမည်လို့ သိရပါတယ် ။ ပွဲတော်သို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများလည်း အများအပြားလာရောက်ကြမည်လို့သိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရွှေမြန်မာများ ခရစ်စမတ်သစ်ပင် ပွဲတော်ကျင်းပမည်နေရာကို သွားရောက်ကြကာ ဘူဆန် ရဲ့ ဆောင်းအရသာကို ခံစားရင်း ခရစ်စမတ် အထိမ်းအမှတ်နေရာများသို့ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဘူဆန်မြို့သားတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ၊ ပွဲတော်သို့ လူကြီး ၊ လူငယ် ၊ အရွယ်အစားမရွေး လာရောက်ပြီး ပျော်ကြပါတယ် ၊
နောက်ပြီး မှာချင်တာ တစ်ခုကတော့ အရောင်အသွေးမျိုးစုံ တောက်ပနေတဲ့ မီးရောင်စုံ သစ်ပင်တွေရှေ့မှာ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖို့ပါ ၊ ပြီးတော့ ဆုတောင်းလေးတွေ ရေးပြီး ခရစ်စမတ်သစ်ပင်မှာ ချိတ်ဆွဲခဲ့ဖို့ မမေ့ခဲ့ပါနဲ့၊
အလုပ်တွေနဲ့ ပင်ပန်းနေကြတဲ့ ရွှေညီအစ်ကိုများအတွက် အပြောင်းအလဲလေးတစ်ခုတင်မကပဲ ဗဟုသုတရကြစေဖို့အတွက် ရေးသားလိုက်ပါတယ်
Period ........ November 30, 2013 – January 5, 2014
*Lights are on from6p.m. to 11:30 p.m.
Venue: ........ Areas around Gwangbok-ro, Jung-gu, Dynamic Busan
Nampo Station (남 포 역 ) (Busan Subway Line 1), Exit 1.
Walk ahead for about 165m and takearight at Gudeok-ro.
Takealeft at the 2nd alley, continue for about 71m and turn right at the first alley.
Go straight for 67m until you see the Gwangbok-ro area.
Take Bus 8, 15, 17, 26, 27, 30, 41, 58-1, 61, 70, 71, 103, 113, 126, 134, 139, or 1003 and get off at Nampo Station.
မြေအောက်ရထားနဲ့ဆိုရင် Namop ဘူတာ (남 포 역 ) ရောက်ရင် ထွက်ပေါက် (၁) ကနေ ထွက်ပြီး ရှေ့တည့်တည့် လမ်းလျှောက်လိုက်၇င် ပွဲတော် ကြီးကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်
Bus ကားတွေကတော့ 8, 15, 17, 26, 27, 30, 41, 58-1, 61, 70, 71, 103, 113, 126, 134, 139, or 1003 စီးပြီး  Nampo ဘူတာမှာဆင်းပါ။
Posted by ဇော်မင်း(ရွှေအလင်းတန်း) at 3:50 PM
Labels: ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှု, ကိုရီးယားသတင်း, ဗဟုသုတ, အပန်းဖြေ